Wararka - Laga bilaabo Febraayo 5-teeda ilaa 20-keeda, waxaan u dabaaldegi doonnaa dabaaldegga guga inta lagu jiro xilligan. Waan ka xumahay wax kasta oo aan adiga kugu habboonayn oo fadlan si xor ah u ila soo xiriir haddii aad si dhakhso leh u hesho jawaab. Waxaan jeclaan lahaa inaan fursaddan uga faa'iideysto adiga iyo qoysaskaaga oo dhan sida ugu wanaagsan ee sanadka cusub ee farxadda leh ee caafimaadka leh ee Shiinaha!
Suxuunta Dheemanka Gringing
Suxuunta Htc shiidi
Saxannada PCD PCing
Qalabka Gaarka ah
Blades Sawir Dheeman
Waxyaabaha Dhexdhexaadiyaha Dhexdhexaadiyaha Dhexdhexaadka ah
Xuduudaha Qoditaanka Juqraafiyeed
Laga bilaabo Febraayo 5-teeda ilaa 20-keeda, waxaan u dabaaldegi doonnaa iidda guga inta lagu jiro xilligan. Waan ka xumahay wax kasta oo aan adiga kugu habboonayn oo fadlan si xor ah u ila soo xiriir haddii aad si dhakhso leh u hesho jawaab. Waxaan jeclaan lahaa inaan fursaddan uga faa'iideysto adiga iyo qoysaskaaga oo dhan sida ugu wanaagsan ee sanadka cusub ee farxadda leh ee caafimaadka leh ee Shiinaha!
Sanadka 2020 Gu'ga
Laga bilaabo Feb 5th ilaa 20th , waxaan u dabaaldegi doonnaa iidda guga inta lagu gudajiro xilligan. Waan ka xumahay wax kasta oo aan adiga kugu habboonayn oo fadlan si xor ah u ila soo xiriir haddii aad si dhakhso leh u hesho jawaab. Waxaan jeclaan lahaa inaan fursaddan uga faa'iideysto adiga iyo qoysaskaaga oo dhan sida ugu wanaagsan ee sanadka cusub ee farxadda leh ee caafimaadka leh ee Shiinaha!
Waad ku mahadsantahay dareenkaaga wanaagsan iyo taageeradaada!
Qaybaha router dheeman（farsamadeena cusub）
CNC router Waxoogaa Goynta Qalabka Diamond xardho Gabdhaha Waayo, marmar Stone iyo dhagax adag
Iyada oo laga faa'iideysanayo noqoshada fiiqan, iska caabinta abrasion ka fiican, isku xirnaansho adag oo aan sahlaneyn in la kala badiyo, waa aaladaha yaryar ee wax lagu shiido ee yar yar, shiidi kara waxaa loo isticmaali karaa sida wareegga gudaha, wareega, jeex jeexa, qaansada, koorta iyo dusha sare ee kale.
Kala duwanaanshaha alaabada la jeexjeexay, korantada korantada iyo biriijka
1) Cimriga ugu dheer
2) Aqoonsi suuq sare ah
3) Si ballaaran loo istcimaalo: Waxaa loo heli karaa jarista microcline, leben, sibidh, granite, marble iyo galaas
1) Sax sax ah
2) Sharfness ka fiican Brazed
3) Waxaa loo heli karaa goynta marmarka iyo dhalada
1) Tiknoolajiyad cusub, oo kafiican sidii hore
2) Cimrigaaga oo ka dheer koronto koronto
3) Hufnaan ka sarreysa tan la shiiday
4) Wanaagsan labada goynta qalalan iyo jarista qoyan
5) Loo heli karo jarista marmar iyo bir
Haddii aad rabto inaad waxbadan ogaato, waxaan aadi karnaa Alibabaheena
Cinwaanka:No.1719, Changjiang Road, Degmada Lianxi, Magaalada Jiujiang, Gobolka Jiangxi.